Wararka - Nalalka dila cayayaanka tamarta cadceeda ayaa si wax ku ool ah u hagaajin kara dhaawaca cayayaanka
Shiinaha, oo leh kheyraad fara badan, ayaa aad ugu adag xakamaynta cayayaanka. Haddii cayayaanka keynta aan la daaweyn waqtigooda, waxay saameyn ku yeelan doontaa deegaanka meelaha kale. Sidaa darteed, waa inaan muhiimad weyn ku saarnaa xakamaynta cayayaanka. Xakamaynta cayayaanka dhaqameed waxay inta badan ku saleysan tahay sunta cayayaanka lagu buufiyo, taas oo aan waafaqsanayn ilaalinta deegaanka iyo shuruudaha deegaanka ee hadda jira. Nalalka sunta lagu buufiyo ee qorraxda waa nooc cusub oo ah qalab lagu xakameeyo cayayaanka jirka, kaas oo si wax ku ool ah u hagaajin kara heerka dhaawaca cayayaanka isagoo aan waxyeello u geysan deegaanka.
Laydhka cayayaanka ee qorraxda, dad badan ayaa yaqaana faahfaahinta. Shaqada ugu weyn ee laambadda cayayaanka ee qorraxda waa dabin iyo dilidda cayayaanka. Iyada oo loo marayo dabin iyo dilida cayayaanka, waxay xaqiijin kartaa jawiga koritaanka dalagga. Waxay inta badan ka kooban tahay saddex qaybood: tiir, laambad dabool, qorraxda iyo baytariga.
Si loo sii wanaajiyo faa'iidooyinka dhaqaale, bulsho iyo bey'adeed ee wax soo saarka beeraha, u daabulida wax soo saarka beeraha oo amaan iyo tayo sare leh leh iyo cunno loogu tala galay bulshada, loona dhiirrigeliyo horumarka waara ee beeraha, beeraha casriga ah ayaa maqaal ka sameeyay teknolojiyadda la dagaalanka cayayaanka. Adeegsiga qalabka si loo xoojiyo ka hortagga cagaaran iyo xakamaynta cudurrada iyo cayayaanka, ma aha oo kaliya inay si wax ku ool ah u ogaato ka hortagga iyo xakamaynta midaysan, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa saameynta ka hortagga iyo xakamaynta cagaaran, waxayna gacan ka geysaneysaa hubinta yareynta sunta cayayaanka iyo kororka dakhliga beeraleyda, iyadoo aasaas adag loo dhigayo horumarinta beeraha cagaaran ee casriga ah iyo beeraha deegaanka.
Nalalka sunta lagu buufiyo ee qorraxda ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaara ka hortagga iyo xakameynta cudurrada dalagga iyo cayayaanka cayayaanka. Waa tiknoolajiyad kontorool jireed oo caadi ah waxayna door muhiim ah ka cayaartaa ka hortagga cagaaran iyo xakameynta cudurrada dalagga iyo cayayaanka cayayaanka. Isticmaalidda fototaxis ee cayayaanka, iyadoo la adeegsanayo isha iftiinka leh soo jiidashada xooggan ee cayayaanka, iyadoo la adeegsanayo habka dilka, iyadoo si wax ku ool ah loo xakameynayo tirada cayayaanka ee aagga tijaabada, yareynta isticmaalka sunta cayayaanka, yareynta wasakheynta deegaanka, dhiirrigelinta horumarka waara ee wax soo saarka cuntada. , wuxuu leeyahay rajo codsi ballaaran oo ku saabsan wax soo saarka beeraha.